Powder enamathela isityalo kufuneka ukuhlangabezana iimeko-5 - China Fod Electrical Engineering
Powder enamathela isityalo kufuneka ihlangane iimeko 5
1, ukusebenza ipeyinti kufuneka kusetyenziswe ngokupheleleyo
Ipeyinti ezahlukeneyo waterproof sinamandla zabo kunye nobuthathaka, uwasebenzise ixesha elide, uphambuke kuwo elifutshane. Ezifana, ene- polyethylene ephezulu geomembrane, bhetyebhetye amahlwempu, kunzima ukusebenzisa manzi phezu kwendlu. Nangona kunjalo, iye yomelelani nincedwa ngamandla, ukumelana olomeleleyo okuhlatywa ingcambu, ububanzi ukuya ku 7M, kunye ezivuzayo welding. Ezi kunamandla efanelekileyo nje ngokuba amanzi e lweetiphu enkulu esemfuleni namachibi, nto leyo zilahleka zezinye izinto.
Cement-based propionic acid Ipeyinti manzi ezingekho mgangathweni njengoko Ipeyinti lyu, kodwa Ipeyinti acrylic Ester nga tirhisiwaka ku substrates emanzi, kanti Ipeyinti lyu akakwazi.
2, alufane manzi iimpawu ezibonakalayo zingcono
iipropati Physical ezifana uqine, zobude ngexesha lekhefu, impermeability amanzi, ukuxhathisa lobushushu bhetyebhetye ophezulu, kunye ukuxhathisa nokuguga yendalo yonke bangadibana iinkcukacha zesizwe. Ukongeza, kukho kwakhona operability ulwakhiwo, oko kukuthi, kulula ukulwenza lula, ongavelisi irhasi enokonakalisa ulwakhiwo, kwaye eziluncedo ezininzi nezingeloncedo xa kuthelekiswa nezinye izinto manzi. izinto ezinjalo izinto ezilungileyo.
3. Tshatisa ukubaluleka isakhiwo
High-high, SBS ophezulu-ngexabiso kancincane inwebu bituminous kunye imifinya EPDM yinto entle izakhiwo nolomgca omqolo wesibini, kwaye "eziphathekayo" kwizakhiwo ekupheleni ephantsi-. Ezifana elicacisa zokwakha, warehouses elifutshane, iindawo intlekele, njl, isuswe emva kweminyaka omnye okanye emibini, ukusetyenziswa ipeyinti ezikumgangatho ophezulu na ukuba ube linxuwa.
4, nezimo okulungileyo kwindawo yokwakha
Uhlobo zokwaleka manzi yahlukile, kwaye bhetyebhetye kwiindawo zokwakha ezahlukeneyo nalo buthathaka. Jiko zisetyenziselwa ukusasaza indawo enkulu ungamalungu manzi. Ulwakhiwo uyakhawuleza kwaye kulula ukuqinisekisa umgangatho. Noko ke, ukuba zingangenwa zangasese kunye zangasese ilahlekile, kunye nepeyinti manzi kuyinto material lokuposa. izinto engqongqo waterproof asetyenziswa ezakheke oluzinzileyo, non-eshukuma iindawo, ezifana neendonga kwigumbi elingaphantsi somgangatho ngamanzi ibe manzi, kodwa xa esetyenziselwa iibhulorho kunye nophahla kweminwe enkulu, isiphumo ulihlwempu, enkulu, kunye nenkunkuma izinto.
5, sinikela ingqalelo operability yokwakha
Ezinye izinto manzi kufuneka iipropati elungileyo ngokomzimba, kodwa kunzima ukuba akhe. Ezifana inwebu anti-yokuncamathelisa, kunzima ukuba kutywinwe amalunga, izinto olungumgubo kunzima ukuba ngokulinganayo, zakohlwaywa, lisasazwa nzima ngakumbi ukuba ezivaliweyo.